မိခင်ဆန္ဒ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မိခင်ဆန္ဒ	7
Posted by manawphyulay on Jun 26, 2015 in Creative Writing, Poetry |7comments
ကိုယ်ဖုတ်သော အုတ် ခံ့ညားခိုင်ခံ့စေချင်သည်…
စိန်ကောင်း ကျောက်ကောင်း တစ်ပွင့် ထွက်စေချင်မိသည်…
ရင်မှာ ဖွားမည့် သမီးလေးအား
တောင်ပေါ်သား says: Bravo ….. manawphyulay Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: thank you for your comment…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2399
aye.kk says: မမြင်ရသေးတဲ့ရင်သွေးပေါ်မှာထားရှိတဲ့မနောရဲ့ အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာနဲ့အတူ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သမီးဦးလေးမို့ ၀မ်းသာပါတယ် ညီမရေ။ ငါ့ညီမ အသက်ရနေလို့ ကိုယ်ဝန်ကို အစွမ်းကုန်ဂရုစိုက်ပါလို့ မှာလိုက်ပါရစေ။
မြစပဲရိုး says: ရွာ ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် ချစ်စရာ သမီးလေး တစ်ယောက်တိုးတော့မှာပေါ့။
. ပြုံးပြောသလိုပါဘဲ။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်၊ အလေးအပင်မမနဲ့။ အသွားအလာ သတိ အမြဲထား။ အစားအသောက် ဂရုထား။ :-))))
အောင် မိုးသူ says: အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ
Alinsett @ Maung Thura says: မိခင်မေတ္တာကို မိခင်ဖြစ်လာချိန်မှာ ပို သိ လာတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲလား